Minister: Wese weGerman achabayiwa, kuporeswa kana kufa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Minister: Wese weGerman achabayiwa, kuporeswa kana kufa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Gurukota rezvehutano reGermany, Jens Spah
Sekureva kwegurukota, munhu wese munyika achabaiwa kana kukundwa neconavirus mumwedzi iri kuuya.
Gurukota rezvehutano reGermany, Jens Spahn, nhasi, vakurudzira munhu wese kuti abaye nhomba, asi akaramba asina chokwadi nezvekuita kuti kupfura kusungirwe. Gurukota rakati kusadzivirirwa kwemombe kuchawanikwa, uye "hapana mushonga unomanikidza unopwanya iyi wave" yehutachiona.
"Pamwe pakupera kwechando chino, sezvinombotaurwa nekunyomba, munhu wese muGermany achabaiwa, kuporeswa kana kufa," akadaro Spahn.
Spahn akataura zvirevo zvake sevamwe vezvematongerwo enyika vanotungamira, kusanganisira avo kubva kuna Chancellor anobuda Angela Merkel. Christian Democratic Union (CDU), vanga vachidaidzira mvumo yekudzivirira kune vagari vese pakati pekukwira kwehutachiona hweCOVID-19.
Mutungamiriri weBavaria, Markus Soeder yakati neChishanu chiyero chemazuva manomwe chechirwere "chapfuura nepadenga" pakati pevasina kubayiwa.
"Ini ndinotenda kuti mukupedzisira, isu hatisi kuzotenderera pane chisungo chejekiseni," akadaro.
Gakava rakafanana rakashandiswa munguva pfupi yapfuura mumwe mutungamiri weEurope, Mutungamiriri weHungary Viktor Orban. Achitaura neredhiyo yeKossuth neChishanu, akapopotera anti-vaxxers, achivatuka achiti "vachaziva kuti vachabaiwa kana kufa."
Will MacPheat anoti:
1. "Majekiseni" haakupi kudzivirirwa uye anoita seanopedza mwedzi mitanhatu chete.
2. Chaive chiitiko chinozivikanwa covid-19 isati yasvika uye zvinotenderwa kuti zviri kuitika nejekiseni reCovid-19 kuti jekiseni risingapi kudzivirirwa kwezvirwere rinokurudzira hutachiona kuti hushanduke huve humwe hutachiona.
3. Saka majekiseni ndiwo ari kufambisa denda kwete asina kubaiwa.
4. Zvave kuratidzwawo zvakajeka kuti kuchengetedza ropa rema nanograms makumi mashanu pamillilita yevhitamini D kunobvisa chero mukana wekurwara zvakanyanya kana kufa kubva kuCOVID-50.
5. Hatisati taziva kuti majekiseni anokonzeresa chii. Zvisinei zviri pachena kuti vanhu vakafa kubva kwavari uye zvichida kupfuura zvatinoziva uye kuti vanhu vari kutambura neutano husina kunaka kubva kwavari.
6. Izvi zvese zvinogona kugamuchirwa dai pakanga pasina imwe yakachipa uye yakachengeteka.
Iyi imwe nzira ndeye vitamin D. Chii chinoda kuitwa zvose nevezvenhau uye zviremera zvehutano hweveruzhinji zviri kusimbisa kudiwa kwemunhu wese kuti awane vhitamini D mazinga. Uye izvi zvinoreva kutora 4,000 kusvika 10,000 IU's pazuva.